वेबसाइट लिनुहोस् II
बुधबार, अक्टोबर 27, 2010 शनिबार, अक्टोबर 18, 2014 निक कार्टर
आज बिहान मैले ठूलो कुराकानी गरेको थिएँ जेब सानोबक्सबाट (यो सहि हो, मैले उसलाई म्याडोनाद गरें। जेब को हुन् भनेर तपाईं जान्नुहुन्न भने, तपाईं कहाँ हुनुहुन्थ्यो?) यो तथ्यलाई नबिर्सनुहोस् कि मैले गल्तिले डबल-शटको अर्डर गरेको थिएँ, र म अझै आफ्नो हातहरू समात्न सक्दिन। मलाई पक्का विश्वास छ कि उसले मलाई के भने क्याफिन चालित उचाई बिना नै गहिरा लाग्यो।
"त्यसोभए, तपाईका लक्षित ग्राहकहरू को हुन्?" मैले सोधेँ, उद्योग, आकार, र अन्य आला वर्णनकर्ताहरूको बारेमा सुन्ने आशा गर्दै।
"हामी कम्पनीको दोस्रो वेबसाइट हो।" जेबले मलाई भन्यो। "तिनीहरूले कम्तिमा एक पटक पहिले यो प्रक्रियाबाट पार गर्नुपर्नेछ।"
दोस्रो? के ऊ अरूको कोट-टेलहरू पछ्याउन चाहन्छ? वा ऊ यति विश्वस्त छ कि उसले अझ राम्रो गर्न गइरहेको छ, ऊ प्रतिस्पर्धालाई बाहिर चम्काउन चाहन्छ। न त। उनी केवल स्मार्ट क्रेतासँग काम गर्न मनपराउँदछन्। एक ग्राहक जो जान्दछ कि तिनीहरू के चाहन्छन्, किन तिनीहरू यो चाहन्छन्, र के गर्दैन (र चमत्कारी रूपमा गरेको) पहिलो पटक काम गर्‍यो।
सबैभन्दा पहिले, यदि तपाईंसँग वेबसाइट छैन भने, एउटा माथि फाल्नुहोस्। Jeb सही। तपाईको उमेर तपाईको सामग्री, डिजाईन, नेभ संरचना, रूपान्तरण बिन्दु, इत्यादिमा खर्च गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो फुल्नेछ। यसले केहि कलेज विद्यार्थीको वरिष्ठ परियोजनाको लागि उत्कृष्ट केस स्टडीको एक हेक बनाउँदछ। तर months महिना पछि तपाई गलत हुन जान्नु हुन्छ। अब, तपाईं तरिका गलत हुन सक्छ, वा तपाईं मात्र केहि गलत हुन सक्नुहुन्छ। तर तपाईं गलत हुनुहुन्छ।
चिन्ता नलिनुहोस्। गलत हुनु भनेको सही हुनुको सब भन्दा चाँडो तरीका हो। उत्पादकता विज्ञ, रबी स्लटर, फ्ल्याट-आउट असफल हुन मानिसहरूलाई प्रोत्साहित गर्दछ। जेबको कुराको लागि, एक पटक तपाईं गलत हुनुभयो – अझ थोरै गलत पनि – अब उहाँ तपाईंसँग काम गर्न सक्नुहुन्छ। अब उसले तपाईलाई साँच्चिकै मद्दत गर्न सक्दछ र तपाईंको कम्पनीको ट्यालेन्टहरू तपाईंको लागि उत्तम सेवामा राख्न सक्दछ।
अब, मानौं तपाईंसँग पहिले नै एक वेबसाइट छ। के यो काम गर्दैछ? के यो तपाइँले चाहानुभएको तरिकाले काम गरिरहेको छ? किन यसलाई पुन: नगर्नुहोस्?
धेरै नै अक्सर, मानिसहरूले वेबसाइटहरू उपचार गर्छन् जस्तो कि उनीहरूले डिजिटल प्रिन्टि before अघि दिनहरूमा मार्केटिंग कोलटरलको उपचार गर्थे। यसलाई पहिले उत्तम बनाउनुहोस्, किनकि यसले "र color्ग सम्म" प्राप्त गर्न यति खर्च गर्छ कि खर्चको औचित्य प्रमाणित गर्नको लागि तपाईलाई १०k वा थप यी टुक्राहरू चलाउनु पर्छ। र त्यसपश्चात, एक पटक यो मुद्रित भयो, यसलाई कम्तिमा एक बर्ष वा अधिकको लागि परिवर्तन गर्ने कुरा पनि नगर्नुहोस्। त्यो बिर्सनुहोस् वेबसाइटहरू नि: शुल्क स्क्र्याप र पुनः गर्नुहोस्। ठिक छ, वास्तवमा स्वतन्त्र छैन। तर टेक्नोलोजीले यो विवादास्पद मार्केटिंग उपकरणलाई सदैव बीटामा राख्न सम्भाव्य बनाउँदछ, कहिल्यै यसलाई फेरि गर्न डराउँदैन।
तपाईंको पहिलो वेबसाइट सुरू गर्ने सिक्ने अनुभव बदल्न सकिदैन। तर यो यथार्थ कारणको लागि हो कि तपाईंको वेबसाइट, II ले साइट बनाउनेछ जुन वास्तवमै फरक पार्छ। ,,, र Take लिनुहोस् मात्र राम्रो हुन सक्छ। तर तपाईंसँग A HAVE TO take ले जानुहोस् प्रक्रियामा जानुहोस् तपाईंले चाहानु भएको चालमा हिर्काउनु अघि। तयार, आगो, उद्देश्य। र फेरि, फेरि लक्ष्य गर्नुहोस्।
ईमेल मरिसक्यो? जेनी र जेन्नेनलाई त्यो नभन्नुहोस्
रातो Bit निलो Bit
अक्टोबर 27, 2010 बिहान 9:57 बजे
मलाई जेबको रणनीति मन पर्छ! एक सफ्टवेयर विकासकर्ताको रूपमा, म नयाँ सफ्टवेयर उत्पादन निर्माण गर्न चाहने ग्राहकहरूलाई कम गर्नको लागि यो उत्कृष्ट तरिका भएको देख्न सक्छु: के तिनीहरूले पहिले गरेका छन्?
म दीर्घकालीन सम्बन्धका लागि फ्रीलान्सिङमा छु। त्यसैले म वेबमा काम गर्न मन पराउँछु, सफ्टवेयर सधैं विकसित र सुधार भइरहेको छ। हाम्रो (मेरो र मेरो ग्राहकहरूको) सम्बन्ध बढ्दै जाँदा सफ्टवेयर अझ राम्रो हुन्छ।
"के तपाइँको वेबसाइट काम गरिरहेको छ?" म तर्क गर्छु कि धेरै कम्पनीहरु संग "काम" को वास्तव मा के अर्थ को एक सुराग छैन। यसैले हामी वेबसाइट व्यवसायमा छैनौं, हामी इनबाउन्ड मार्केटिङ व्यवसायमा छौं। हामीले धेरैजसो ग्राहकहरूका लागि वेबसाइटहरू निर्माण गर्दैनौं... यो जेब जस्ता मानिसहरूका लागि उत्तम हो... तर यदि वेबसाइट एक सम्भावना र हाम्रो ग्राहक बीचको बाटो हो भने, हामी पक्का गर्छौं कि सडक पक्का छ र जानको लागि तयार छ!
यो साचो हो! तपाईंको पहिलो प्रयास लगभग निश्चित रूपमा खराब हुन गइरहेको छ।
द मिथिकल म्यान-मन्थका लेखक फ्रेड ब्रूक्स भन्छन्: “एउटालाई फाल्ने योजना बनाउनुहोस्। जसरी भए पनि तिमीले गर्नेछौ।”